Global Voices teny Malagasy » Ny Fankalazana Ny Fandraisan’anjaran’ny Afro-Latino Tany Amerika Latina · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 02 Avrily 2018 7:04 GMT 1	 · Mpanoratra Eduardo Avila Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Fifindràmonina, Mediam-bahoaka, Tantara
Nankalazaina tany Etazonia sy Kanada nandritra ny Febroary 2010 ny Volana natokana ho an'ny Tantaran'ny Mainty Hoditra , ary matetika ny hetsika manokana sy ny hetsika fahatsiarovana hafa no mameno ny tetiandro mandritra io fotoana io. Bilaogera maromaro no nanangana tetikasa antserasera sy nanome fanazavana fanampiny momba ireo vondron'ny razambe Afrikana Mainty ho famenoana ny lanonana, ho fanomezam-boninahitra .
Nanoratra tao amin'ny bilaoginy  Inside My Head i Anthony Otero, bilaogera sady Pôrtô Rikana no Ekoadaoreana, izay niasa tao amin'ny Oniversite Syracuse :
Tena mifantoka amin'ny Afro-Amerikana araka ny tokony ho izy isika rehefa tena mandinika ny dikan'ny hoe volana ho an'ny tantaran'ny Mainty Hoditra. Na izany aza, tsara raha itarina any amin'ireo Mainty Hoditra any Amerika Latina ity sehatry ity.
Manondro ireo Amerikana Latina miaraka amin'ny razambeny Afrikana Mainty Hoditra ny teny hoe Afro-Latinos na Afro-Amerikana Latina  , izay heverina fa eo anelanelan'ny 100 ka hatramin'ny 150 tapitrisa manerana ny faritra. Jereo ato  ho an'ny mponina Afro-Latino any Amerika. Teny iray hafa izay nampiasan'ny Afrikana-Latinos maro hiantsoany ny tenany ny hoe Latinegro/a. Midika hoe mainty hoditra amin'ny teny Espaniola ny teny hoe “negro” .
Niaraka tamin'ireo bilaogera Bianca Laureano  sy Prof. Susurro , nanomboka ny bilaogy Latinegr@  tao amin'ny Tumblr i Otero. Ny asa hotanterahiny:
Ny hampivelarana ny Volan'ny Tantaran'ny Mainty Hoditra miantso ny tenany hoe LatiNeg@s, Afro-Latinos ary Afro-Caribeños no tanjon'ny maro aminay. Mitaky ny lova sy ny tantara Afrikana izahay amin'ny maha-anay anay, matetika izahay no ahilika amin'ny Tantaran'i Amerika, na io mandritra ny tantaran'ny Mainty Hoditra na ny tantara Latino (atao ny 15 Septambra ka hatramin'ny 15 Oktobra). Miaraha aminay amin'ny fanomezam-boninahitra sy ny fankasitrahana ny LatiNegr@s amin'ity taona ity mandritra ny Volana natokana ho an'ny Tantaran'ny Mainty Hoditra sy ny Latino. Mainty Hoditra, Latino izahay ary avy any Karaiba . MISOLOTENA izany izahay!
Namariparitra ny fomba nahaterahan'ny tetikasa tao amin'ny bilaogy  Vivir Latino ihany koa i Laureano :
Nanomboka izany rehetra izany rehefa nandefa ny lisitry ny LatiNegr@s ny taona 2010 aho. Nanomboka niresaka tamin'ilay mpanoratra sady poety Anthony aho momba ny tsy fahalalana ny tantarantsika, ny fomba nanilihana antsika ary ny fikatsahana ny fankatoavana sy ny fisiantsika (mainty hoditra). Nanapa-kevitra ny hamorona tetikasa virtoaly tao amin'ny tranonkalanay izahay ary namorona sehatra iraisana hanaovana adihevitra, ny fandraisana andraikitra, ary ny famokarana fahalalàna ihany koa.
Sarin'i Schomburg, nampiasàna lisansa Wikimedia Commons
Efa nanampy tamin'ny famoahana ny lisitr'ireo Afro-Latinos hojerena tamin'ny taona 2010  izy ary nizara torohay momba ireo Afro-Latinos manandanja avy any amin'ny firenena niaviany ny hafa tahaka ilay bilaogera Efrain Ortiz, Jr. Ortiz. Nolazain'i Ortiz ohatra ny momba an'i Arturo Alfonso Schomburg , ilay mpahay tantara Pôrtô-Rikana, mpanoratra ary mpikatroka, izay nanampy tamin'ny fikarohana momba ny fandraisana anjara lehibe nataon'ny Afro-Latinos hafa tamin'ny faramparan'ny taonjato faha-19 sy ny fiandohan'ny taonjato faha-20.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/04/02/116967/
 Volana natokana ho an'ny Tantaran'ny Mainty Hoditra: http://en.wikipedia.org/wiki/Black_history_month
 Nanoratra tao amin'ny bilaoginy: http://latinegro.blogspot.com/2010/02/grassroots-project-latinegrs.html
 Afro-Latinos na Afro-Amerikana Latina: http://en.wikipedia.org/wiki/Afro-Latin_American
 fomba nahaterahan'ny tetikasa tao amin'ny bilaogy: http://vivirlatino.com/2010/02/02/including-latinegrs-in-black-history-month.php
 lisitr'ireo Afro-Latinos hojerena tamin'ny taona 2010: http://www.amplifyyourvoice.org/u/Media_Justice/2010/1/7/LatiNegrs-To-Look-Out-For-in-2010